Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း)
Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
သွေးပေါင်တက်ခြင်းကိုကုသရာမှာ အခြားဆေးတွေနဲ့တွဲပြီး သို့ သူ့ချည်းသက်သက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ကိုချပေးခြင်းက လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါဖောက်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပြဿနာတွေကို မဖြစ်အာင်ကုူညီပေးပါတယ်။ သွေးကြောကျယ်ဆေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းမွန်လွယ်ကူစေရန် သွေးကြောတွေကိုပြေလျော့စေပါတယ်။ နှလုံးမညှစ်နိုင်ခြင်းကြွက်သားအားနည်းခြင်းအတွက် အခြားဆေးတွေနဲ့ တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သင့်ဆရာဝန်ရုံးခန်းဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ ထိုးဆေးအနေနဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာ Hydralazineထိုးဆေးအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် သင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူက သင့်ကိုအသုံးပြုနည်းကို သင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို သေချာနားလည်သင့်ပါတယ်။ ဆေးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သင်သင်ထားခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာပါ။ မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကို မေးနိုင်ပါတယ်။
အနည်တွေပါနေမယ်ဆိုရင်၊ အရောင်နောက်နေမယ်ဆိုရင်၊ ပုလင်းကွဲနေမယ်ပျက်စီးနေမယ်ဆိုရင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမလဲဆိုတာကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံမှာမေးနိုင်ပါတယ်။ စွန့်ပစ်ဖို့အတွက် စည်းကမ်းတွေအကုန်လုံးကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
hydralazine သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
သွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာများ (porphyria)၊ သွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ နှလုံးပြဿနာများ၊ သွေးအတွင်း vitamin B6ပမာဏနည်းခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ကိုယ်ပိုင်ခုခံအားရှိသော အရေပြာရောင်သည့်ရောဂါတစ်မျိုး
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးလေးဘက်နာရောဂါ၊ အသည်းကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါဖောက်ခြင်း စတာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်
ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ( သွားဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် hydralazineဆေးအသုံးပြုနေကြောင်း သင့်ဆရာဝန် သို့ သွားဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ )
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အောက်ပါပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းဂရုပြုသင့်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်မှုများ ( အဖုအပိမ့်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပါးစပ်မျက်နှာနှုတ်ခမ်းလျှာရောင်ခြင်း၊
ပြင်းထန်တဲ့နာတာရှည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း သို့ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင့်သွေးကြောကိုသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဆေးများ ၊ သွေးတိုးကျဆေးများ ((e.g., diazoxide)၊ အခြားသွေးကြောကျယ်ဆေးများ (e.g., isosorbide, nitroglycerin) ( ဒီဆေးတွေဟာ hydralazineဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြောပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်မှာမေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေကို မေးနိုင်ပါတယ်။
Monoamine oxidase (MAO) inhibitors (e.g., phenelzine) hydralazineထိုးခြင်းကြောင့် ဒီဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုး ကျိုးတွေ ပိုဆိုးသွားနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
hydralazineထိုးခြင်းကြောင့် ဒီဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုး ကျိုးတွေ ပိုဆိုးသွားနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Epinephrine ( hydralazineထိုးခြင်းကြောင့် ဒီဆေးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းမှာ -10 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့လေးကြိမ် ပထမ၂ရက်ကနေ လေးရက်အတွက်
ပထမတစ်ပတ်အတွင်းပမာဏညီမျှစေရန်အတွက် 25 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့လေးကြိမ်ထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ပတ်မြောက်နဲ့နောက်ထပ်အပတ်တွေအတွက် 50 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့လေးကြိမ်ထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- ုးအကျိူးသက်ရောက်မှုပေးနိုင်တဲ့ အနည်းဆုံးပမာဏထိ ထိန်းညှိပေးသင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ – 20 to 40 mg အကြောဆေး၊ အသားဆေး၊ လိုအပ်သလိုထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောလူနာများ ( အထူးသဖြင့်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေသည့်လူနာများ) ပမာဏအနည်းငယ်သာလိုပါတယ်။ )
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ နှလုံးမညှစ်နိုင်၊ နှလုံးသွေးအိုင်ခြင်းရောဂါအတွက်
အစောပိုင်းအသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ – 10 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့ ၄ကြိမ်
800 mg တစ်နေ့သုံးကြိမ် နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းက နှလုံးအထွက်ဝန်ကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် နှလုံးသွေးအိုင်ခြင်းကိုကုသရာမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေနဲ့စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုတွေပြုလုပ်ပေမဲ့လည်း စိတ်ချယုံကြည်ရမှုနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ပမာဏ အူလမ်းကြောင်းပြင်ပမှပေးတဲ့ဆေးများ အကြောဆေး သို့ အသားဆေးအနေဖြင့် 1.7-3.5 mg/kg of body weight နေ့စဉ် ၊ လေးကြိမ်မှ ခြောက်ကြိမ်ထိ ခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။
Hydralazine (ဟိုင်ဒရယ်လ်လာဇင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အရည်ပုံစံ၊ ထိုးဆေးပုံစံ၊ 1.7-3.5 mg/kg of body weight
ဆေးပြား၊ သောက်ဆေး၊ 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg